Umxholo weNtengiso kunye neNkqubo yoThengiso loMxholo »Iphepha 313 lama-378 Martech Zone
Iimveliso zomxholo, iinkonzo kunye neendaba zabathengisi kwibhlog yeTekhnoloji yeNtengiso Iimpapasho ezimhlophe, izifundo zamatyala, ukubhloga ngokudibeneyo, kunye neengcebiso zokubhala kunye namaqhinga Martech Zone
Adtech Uhlalutyo novavanyo UkuThengiswa kweMpahla Iinkcukacha Uqoqosho kunye noRhwebo email Marketing Itekhnoloji eKhanyayo Ukuthengisa umsitho Ukuthengisa kunye neeVidiyo zokuThengisa Iincwadi Zentengiso Imicimbi yentengiso Amanani entengiso Izixhobo Zokuthengisa Uqeqesho lweNtengiso UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethi Eyobudlelwane boluntu Ukunika amandla ukuthengisa Uphando lwezoPhando Social Media Marketing
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Kulungile, khange athethe buqu, kodwa amazwi kaSeth Godin athetha lukhulu kwisihloko sam seshishini kunye neendlela zokuthengisa ezentlalo ezingahambanga kakuhle.
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ukuba kudala ungumfundi apha, uyazi ukuba ndithandana noStumbleUpon. Ibhlog yam iyaqhubeka nokufumana inani eliphezulu leendwendwe ngeStumbleupon. Njengomgaqo ngokubanzi, abantu abakuthandi ukuba uzenzele ngokwakho ukukhuthaza amaphepha akho kwiindawo ezinje ngeStumbleUpon. Ndizithumele ezam izithuba ngaphambili - kodwa kunqabile. Ukuba bendicinga ukuba iposti inempikiswano okanye inokufumana ingqalelo enkulu kwimpembelelo yayo,
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ukuba wenza uphando kwiziza eziphambili ezazisa ingxoxo yeGunya le-Twitter, uyakufumana iirenti zam ezenziwe kwisininzi sezimvo. Indiqhubela amandongomane wonke umntu eqhubeka nokuthetha ngayo- kwaye umntu othile waya wakha iTwititi kunye neTwithority. Igama elingcono beliya kuba ziiTweets zokuKhangela ekuHlaleni i-odolo ngenani labalandeli. Ndiyazi, ligama elide kakhulu elo, kodwa yile nto kanye. Ayiyo
NgeCawa, uDisemba 28, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ukuba andinanto ndinokubhala ngayo kwibhlog yam, ndihlala ndikhangela kwaye ndifumana amakhonkco amangalisayo kwaye ndabelana ngawo endaweni yoko. Ukuba uthatha ixesha ukubuyela kwindawo yam okanye ubhalisele ukutya kwam, ndifuna ukuqinisekisa ukuba andichithi xesha lakho ngesiqingatha sokubamba iposti yebhlog. Ngaphandle kwemizamo yam, ezinye zezithuba zam zezinto ezinukayo kwaye abanye bafumana itoni yoqwalaselo. Emva kokubhloga iminyaka ngoku,
Uyazi ukuba unguSmippy Nini…
NgoMgqibelo, Disemba 27, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Uyazi ukuba uyi-hippy yemidiya yoluntu (smippy), xa: uqala okanye utyikitye uxwebhu lwezikhalazo lokumisa iimpendulo ze-Twitter ngokuzenzekelayo… ezingayi kwenza nto ukumisa iimpendulo ze-Twitter ngokuzenzekelayo. Ucinga ukuba ukukhuphela ibhlog yakho yenkampani kukwaphula umthetho wokubhloga. Ucinga ukuba inkampani ephuhlisa umlinganiswa kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni ukuze ithengise imveliso yabo sisicwangciso esingaphumeleliyo, nangona isiphumo sokwanda kwentengiso kunye nokuvezwa. Ucinga iibhloko
Edlulileyo 1 ... 312 313 314 ... 378 Next →